एक वर्षमा झण्डै ४७ करोडको खुर्सानी - Terhathumkhabar::TerhathumKhabar||तेह्रथुम संचार विकाशको लागी हाम्रो पहल
एक वर्षमा झण्डै ४७ करोडको खुर्सानी
तेह्रथुम, पुस २७ – तेह्रथुममा अकबरे खुर्सानीको व्यावसायिक खेती गर्ने क्रम बढेको छ । किसानले खाद्यान्न बालीको सट्टा व्यावसायिक रुपमै अकबरे खुसार्नीको खेती गर्न थालेका हुन् । अकबरेबाट आम्दानी पनि राम्रो हुने गरेको किसानको भनाई छ ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार यसवर्ष झण्डै ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको अकबरे खुर्सानी उत्पादन भएको छ । जिल्लाका किसानले २० हेक्टर जमिनमा लगाएको अकबरे खेतीबाट यो वर्ष ३ सय १२ मेट्रिक टन अकबरे खुर्सानी उत्पादन भएको हो । अकबरे खुर्सानीको खुद्रा मूल्य अहिले किलोको १ सय ५० रुपैयाँ छ । यस हिसाबले जिल्लामा यो वर्ष ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको खुर्सानी उत्पादन भएको हो ।
बजारमा अकबरे खुर्सानी न्युनतम एक सयदेखि चार सय रुपैयाँ सम्ममा किनबेच हुने गरेको छ । यो वर्ष अघिल्लो वर्ष भन्दा ६२ मेट्रिक टन बढी अकबरे उत्पादन भएको कार्यालयका बागवानी विकास अधिकृत दीपा देवले जानकारी दिनुभयो । ‘गाउँ–गाउँमा अकबरेको व्यावसायिक खेती सुरु भएपछि यो वर्ष उत्पादन बढेको हो’ उहाँले भन्नुभयो ।
जिल्लामा अलैँची र अदुवापछि बढी खेती गरिने नगदेबाली अकबरे खोर्सानी हो । परम्परागत शैलीमा खेती गर्दै आएका किसानहरु भारतीय बजारबाट समेत अकबरेको माग आउन थालेपछि अझ उत्साहित बनेर व्यावसायिक खेतीमा लागेको कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत रोहिणीराज घिमिरेले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार जिल्लाको कुल उत्पादनको ४५ प्रतिशत पूर्वका विभिन्न बजार हुँदै भारततर्फ निकासी हुने गरेको छ । बाँकी उत्पादन जिल्लाका विभिन्न बजार र किसानको आफ्नो प्रयोजनमा खपत हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
सिँचाई समस्या हुने र अन्य खेतीमा बढी श्रम पर्ने भएकाले पनि किसानको ध्यान व्यावसायिक खुर्सानी खेती तर्फ गएकोे हो । किसानले अकबरेको अचार बनाएर समेत बेच्ने गरेका छन् । बजारको समस्या नरहेकाले पनि आफूहरु उत्साहित भएको किसानले बताएका छन् ।
‘बजारको समस्या छैन’ ओयाक्जुङकी किसान मालती जोगीले भन्नुभयो, ‘आत्म विश्वासका साथ व्यावसायिक रुपमा खेती गरे खुर्सानीबाट पनि राम्रो आम्दानी हुने रहेछ ।’ उहाँले ९ सय ५० वटा बिरुवा किनेर अकबरेको व्यावसायिक खेती सुरु गरेकोमा अहिले यो संख्या बढाएर १२ सय पु¥याउनुभएको छ । अहिले धान तथा मकै फल्ने खेतबारीमा किसानले अकबरेको खेती थालेका छन् ।
जिल्लाका सबै गाविसमा छिटपुट खेती भएपनि दुवै नगरपालिकासहित १० भन्दा बढी गाविसमा भने व्यावसायिक रुपमा अकवरे खुर्सानीको खेती गर्ने क्रम बढेकोे कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । ओयाक्जुङ, फाक्चामारा, पञ्चकन्या, सुदाप, ओखे्र, छातेढुङ्गा, हमरजुङ, सिम्ले र खाम्लालुङ गाविसमा अकबरेको व्यावसायिक खेती भइरहेको छ ।
सम्बन्धित समाचार नेपालको पहिलो बस जहाँ एसी,मिनी क्यान्टिन, शौचालय र अत्याधुनिक सेवासुविधा छ | हेर्नुहोस सोहि बस भित्रको दृश्य, सोहि यात्रा गर्ने यात्रुहरु के भन्छन ? ड्राइभर लाइ कस्तो अनुभव छ ? हामीले स्थलगत तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस भिडियोमा
नेपालमै पहिलो पटक क्यान्टिन र शौचालयसहितका बसहरु संचालनमा (भिडियो)